I-Joglo Gumuk - i-Eco-Lodge 1 enembonakalo yerayisi - I-Airbnb
I-Joglo Gumuk - i-Eco-Lodge 1 enembonakalo yerayisi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFaozan
Le ndlu incinci, ibukekayo eyenziwe ngamaplanga imi kwaye inembono entle phezu kwamasimi erayisi. Ifakwe kumda welali encinci, ibonelela ngomxube ogqibeleleyo wokuhlala kwindawo yetropiki kunye nokufikelela ngokukhawuleza kumbindi wesixeko saseYogyakarta.
Ukuba unqwenela ukuba uhlale ubusuku obunye kuphela, nceda ubuze kuthi kuqala kwaye sinokukuvulela ukhetho.
Sithatha ukhuseleko lweendwendwe zethu kunye nabasebenzi ngexesha lobhubhani siluthathela phezulu kakhulu.
Umgcini wendlu wethu uya kunxiba imask kwaye silandela ngokusondeleyo izikhokelo malunga neprothokholi yococeko. Uyilo olubanzi lwezindlu zethu ezinamakhitshi abucala kunye neendawo ezivulekileyo zifanelekile kakhulu ukuba zikhuseleke ngexesha lePandemic.
I-Rumah Gladak - le yindlela ebizwa ngayo indlu ngokwembali - ekuqaleni yayisetyenziselwa ukugcina kunye nokomisa iinkozo zerayisi. Sabeka le ndlu incinci imnandi kwindawo entle yomhlaba wethu kunye nembono enkulu phezu kwamasimi erayisi.
I-Rumah Gladak yindawo encinci ebonelelwe ngokulula kunye nebhedi ye-bamboo ye-140 x 200 cm egqibeleleyo kumntu omnye okanye abantu ababini. Kudityaniswe nendlu kukho igumbi lokuhlambela elivulekileyo elivulekileyo elidityaniswe kwigadi encinci yetropiki. Sibonelela nge-eco-friendly, iisepha zendalo ezenziwe ekhaya.
Amanyathelo ambalwa ukusuka eRumah Gladak yikhitshi yokusetyenziswa kwakho ngasese kuphela, exhotyiswe ngefriji encinci, izixhobo zasekhitshini ezisisiseko, ikofu, iti kunye nendawo yokutya encinci ejikelezwe yigadi.
Sinikezela ngesidlo sakusasa, esilungiselelwe ngabasebenzi bethu. Sikwalungiselela ukuhanjiswa kokutya kwesintu ukusuka kwilali kunye neendawo zokutyela ezikufutshane ngesidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa.
Ukutya kwasekuseni, sigxininisa kwiimveliso zendawo. Unokukhetha phakathi: isonka kunye namaqanda , isidudu serayisi kunye nesosi ye tempeh ebabayo, Isidudu somgubo weRice kunye nebhanana okanye uNasi Goreng (irayisi eqhotsiweyo). Isidlo sakusasa ngasinye sinikwa iti okanye ikofu (ikofu iya kuphuma kweyethu indawo yokupheka ikofu) kunye nokukhethwa kweziqhamo zasetropiki.
Silungiselela i-massage yeendwendwe ngee-massage therapists ezivela kwidolophana. Ngesicelo, abasebenzi bethu benza i-apointment ye-massage. Ngexesha lePandemic, i-massage isenokwenzeka. Sisebenza nenkampani, elandela umthetho olandelwayo we-COVID ngokuqinileyo kwaye ivavanya abasebenzi bayo rhoqo.
Sinikezela ngeeklasi zeYoga zabucala kwindawo yethu entsha yokwakhiwa kweYoga Studio, imeko kumhlaba wethu. Ngexesha lobhubhane, iklasi yeYoga inokwenzeka. Utitshala weYoga uya kukhathalela ukugcina umgama kwaye iiklasi zenzeke kwindawo evulekileyo.
Kukho inkonzo yokuhlamba impahla esekelwe kwiimfuno zakho.
4.87 · Izimvo eziyi-247
IDAMA LOKUQUBHA NEZIDLO
Ngaphandle kweeWarungs zesiNtu ezilalini, kukho iindawo zokutyela kule ndawo, ezinokuhanjwa okanye ngebhayisekile okanye isithuthuthu. Kukho idama lokuqubha e-BLUE GARDEN Cafe kunye nePool yokuQubha (malunga nemizuzu eli-10 yokuhamba).
IZINTO EZENZIWE KWIILALI EKUFUTSHANE
Indawo yethu yaziwa ngemisebenzi yezandla. Ilali yethu liziko lemizobo yeWayang Kulit (oonopopi bethunzi besikhumba). Kukwakho neziko leceramic eKasongan, ilali yokupeyinta iinkuni. Siyile imaphu ukunika uqhelaniso kwiilali ezisingqongileyo kwaye singakunika iingcebiso malunga noku.
Ukufumana amacebiso angakumbi okuhamba, sayila incwadana encinci yohambo kwindawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Faozan
IRumah Gladak imi kumhlaba wethu kunye nendlu enkulu - indlu yamaplanga yembali, esiyakhela yona ukuze siziphilise. Kuba sihamba kakhulu, siza kunika le ndlu ngamaxesha athile ukuze siyirente.
Kuya kubakho umhlobo wethu ekungeneni, othetha isiNgesi kakuhle kwaye unokuqhagamshelana nanini na ukuba unemibuzo.
IRumah Gladak imi kumhlaba wethu kunye nendlu enkulu - indlu yamaplanga yembali, esiyakhela yona ukuze siziphilise. Kuba sihamba kakhulu, siza kunika le ndlu ngamaxesha athile ukuz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Yogyakarta